28gallon Abrasive Sand Blaster miaraka amin'ny Vacuum
1) Ampiasao miaraka amin'ny haino aman-jery blast, anisan'izany ny silica, voatifitra ary ny akorandriaka
2) Fanaka vovoka azo averina
3) 6 "kodiarana aoriana" halavirana ho an'ny fitaterana mora
4) fanjifana rivotra: 6-22.5CFM @ 115PSI
5) Herin'ny motera: 1200W
6) Sady anaty rivotra: 1/2 "-18NPT
7) habeany tanke: 41 '(H) x 15 "(I. D)
1) Afa-miorina ao anaty banga dia manafoana ny filana fitaovana. Famerenam-bokatra fanararaotana raha te hampiasa indray.
2) Manasaraka ny sakoroka amin'ny tain-tany
3) Sakafo fanadiovana
Item isa Pcs / ctn GW / NW Dimension Q'TY / 20 Fanamarihana Q'TY / 40 '
Milina sandoka mandrakizay 28gallon
1pc: 40 / 36kg 102x46x51.5cm 110PCS 220PCS
Ny banga efa naorina dia manafoana ny filana amin'ny fofonaina ilaina. Manasaraka ny sakoroka amin'ny setroka. Sakafo fanadiovana.
tifitra Peening Machine, Kodiarana fanapoahana tifitra, H miendrika basy mitifitra, nitifitra fatratra Spare Parts, Fanapoahana tsiro, Masinina fipoahana baomba, Ny vokatra rehetra